Programmer OS: iyo nyowani yekushandisa sisitimu ye programmers | Linux Vakapindwa muropa
Programmer OS: iyo nyowani yekushandisa sisitimu kune programmers
Ndatotaura kare muzvinyorwa zvakawanda izvo zve Batsira nharaunda Ye software yemahara uye yakavhurika sosi, hazviwanzo kuve zvakakosha kuti tizive maitiro uye nekupa kodhi kumapurojekiti, tinokwanisa zvakare kubatana mune dzimwe nzira dzakawanda sekugadzira zvinyorwa, kugadzira shanduro, kana kushambadzira mapurojekiti matsva nekuvabatsira kukura. Zvakanaka, nhasi ndeimwe yenguva idzo dzandinoda zvakanyanya uye tichazopa chirongwa chechidiki chine chinangwa chekugadzira chaiyo yekushandisa sisitimu yevagadziri.
El chirongwa chinonzi Programmer OS Uye kana iwe uri mugadziri, ichokwadi kuve chako chaunofarira kugoverwa kweGNU / Linux. Chaizvoizvo ihwo Ubuntu system kune akateedzana maficha akawedzerwa kuti iite ihwo hushamwari uye inoshanda sezvinobvira kune programmers. Kana iwe uchifarira kurodha pasi iyo ISO mufananidzo weprojekti kana kudzidza zvakawanda nezvayo, unogona kuwana iyo nzvimbo yepamutemo kubva kushamwari yedu Joman anotungamira chirongwa ichi.
Programmer OS inopa vashandisi nezvose zvakanakira Ubuntu pamwe ne kuwanda kwematurusi ekuvandudza yeapplication, mawebhusaiti nemitambo yemavhidhiyo, kunyangwe yekumisikidzwa kwenzvimbo nyowani. Zvese mune imwe saka haufanire kushandisa nguva uchitsvaga uye nekuisa anodiwa mapakeji kuti utange kuvandudza. Pakati pemapakeji atinogona kuwana pane anoshandiswa zvakanyanya mitauro yekuronga, mameseji edhisheni, uye nharaunda dzekuvandudza kana maIDE. Kududza mienzaniso mishoma, isu tinowana Subime Chinyorwa 2, NetBean, nezvimwe.
Uye kana izvo zvikaita sezvidiki kwauri, Programmer OS inochengetedza zvimwe zvinhu zvatinokukoka kuti uburitse, senge yakasarudzika mitauro mitauro uye IDE ... Pamusoro pezvo, inogona kutorwa pasi se dzakasununguka zvachose, kunyangwe kuti ubatsirane neprojekiti ndinokukurudzira kuti upe imwe mari. Kubva kuLxA isu tinoda kuti chirongwa ichi chizadzise zvinangwa zvacho uye ive nzira inosarudzika yevanogadzira, vachitora huwandu kubva kuMacOS neWindows.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Programmer OS: iyo nyowani yekushandisa sisitimu kune programmers
Nhau huru! Ndiri kuenda download uye edza nayo! Ndatenda. Kwaziso.
Zvakanaka, kutaura chokwadi, iyo pfungwa inoita kunge yakapusa kwandiri; Ndinotsanangura. Ndezvipi zvinoshandiswa kuva n ides uye mameseji edhita akaiswa kana imwe ichiwanzo kukwana iwe Kana iwe ukandiudza kuti inouya nechombo panguva yekumisikidzwa kwaunoudza iwe kuti unoda kuisa (IDES, vapepeti, maraibhurari, nezvimwe ...) Ini ndaizozviona zvakanaka, asi izvi zvinoita kwandiri kutambisa nzvimbo
Patrick Rodriguez akadaro
Ini ndinoona yako yekutaura inonakidza. Nekudaro, michina yazvino inowanzo kuunza yakawanda nzvimbo yekuchengetera navo, uye zano rekuti iyo OS nyowani inosanganisa maturusi mazhinji mukana, sezvo zvichibatsira kuongorora mimwe mitauro, nezvimwe.
KURUMBIDZIRA MBERI NEZVEProjekti!
Pindura patricio rodriguez
Miguel Gonzalez placeholder mufananidzo akadaro
Imwe nguva yapfuura ndakaedza inonzi SemiCode OS, kana mumwe munhu akaedza zvese (semicode neiyi) kutsikisa ruzivo rwako. Ndiri kuzotsvaga iyo ISO ye semicode yekuisa izvo zvimiro zvainazvo.
Pindura Miguel Gonzalez
Ini handisi kuona zvakanakira ... Mumwe nemumwe anofanirwa kugadzirisa nharaunda yake zvinoenderana nezvaanoda kugadzira.
Kuva nemazano mazhinji kungave kutambisa nzvimbo, asi ini ndichaedza. Kwaziso
Ini ndinofunga kuti kugovera hakuna chekupa, chero zvazvingava zvirinani kushandisa Ubuntu nekuisa izvo chete zvaunoda, asi zvakadaro
Kuchazombove nerutsigiro nedoti mambure? Ini ndinorota kuvandudza mawebhu aps ndisina kana pfungwa senge Visual Studio ichidya yakawanda zviwanikwa. Ini ndakapindwa muropa ne c # chimiro chemubatanidzwa uye mvc
Daniel Vera akadaro
Ini handioni chakanakira, zvakapusa kuve nekuisa maturusi asiri kuzoshandiswa, nekuti semusimudziri iwe unowanzo sarudza IDE iyo yaunogadzirisa nemapulagi uye macros ekutsigira chinhu.
Kunze kweizvozvo hazvina musoro kupedzera nzvimbo, ndangariro uye nguva neUbuntu. Kune rimwe divi, mushambadzi akanaka haasi iye ane iyo inodhura kwazvo IDE kana mupepeti, inotonhorera mupepeti, kana ane akawanda IDES uye maturusi pane yavo system. Musimudziri akanaka mumwe munhu anoziva maitiro ekushandisa software yeinjiniya uye pasi pemamiriro ezvinhu anosarudza, kuronga uye dhizaini zvine hungwaru.
Izvo zvakakwana kuve nechero system (Windows, Mac OS, Fedora, Debian, Ubuntu) uye wochinjisa kune kuravira kweumwe neumwe. Kana iyi sisitimu nyowani ichibvumidza scaffolding uye sarudzo yemapakeji akavakirwa parudzi rwebudiriro kuti iitwe zvinogona kutaurwa kuti ine mukana mushoma, sekunge vakaita YeoMan OS.
Nenzira, kune avo vanoda kuvandudza .NET paLinux, kwemakore mashoma ikozvino .NET inogona kugadzirwa paLinux, tarisa Microsoft's .net musimboti.
Pindura kuna Daniel Vera
Ndinozviona zvichizvitutumadza kuidaidza kuti OS nekuti ingori Linux ine maturusi ekuvandudza akaiswa. Kune rimwe divi, ini ndinonamatira kune uyo anoti hapana chakanyanya kushandiswa pakuve neyese mitauro iripo yakafanogadzwa ... zvirokwazvo pane dzimwe nguva paunoda JAVA 6 uye Java 8 (semuenzaniso). .. iyo yauchazofanira kugadzirisa zvakare Linux kuti utsigire ese maBhaibheri.
Severiano ballesteros akadaro
Imwe nonsensical distro, mugadziri anogadzira rake rekushandisa pasi pechirongwa chinonyanya kumunakira, ino yakaita senguva apo chiLatin panchis dzakangoburitsa dzakashandurwa vhezheni dzeWindows XP uye mutsetse wemapenzi wakapa gumi rangu, mupiro wakanaka, kuenda pasi. ..
Pindura Severiano Ballesteros
Zvinoita sekunge iwe waisa Cyanogen mod pane android, iwe unoisa mashoma maapk muhurongwa, iwe unogadzira backup yeesisitimu pamwe neshanduko dzakaitwa uye dzakagadzirira kupenya, iwe unoshandura bhutsu kupaza, ma icon, kumashure etc. Uye iwe unogovana, hahaha, ndicho chinhu chepedyo kushandisa systemback hahahahaha
kuuraya tenzi akadaro
Saiti yepamutemo iri pasi… Ini ndiri shasha yekutsvaga Linux distros, kunyangwe kana vatsoropodzi vachiti ivo vakaipa zvakanyanya kana inutlies… hapana chakafanana nerangu ruzivo.
Icho chinongedzo hachisi kushanda ...
Ini ndinobvumirana nekomendi yako ... hapana chakafanana neyangu ruzivo ...
Ini pachangu ndinofara kwazvo neArch, zvisinei ini ndinoda kuongorora mamwe ma distros kuti ndione masisitimu uye zvimwe zvinhu zvine hunyanzvi… Ini ndinoshandisa virtualbox kutevedzera iyo distros uye kana ndikaona chirongwa chandinoda ndino chiwedzera kune yangu distro ... zvakafanana ne kurongeka.
Handingati haibatsiri kana kuti haina chainopa ... inounza ruzivo nemaonero, chokwadi chekuti isu tajairira kuita zvinhu neimwe nzira hazvireve kuti hatigone kugadzirisa ...
Unogona kuita zvitsva usingaumbike ... nekungowana zvitsva.
Peji yepamutemo iri pasi, mumwe munhu angairodha pasi?
Ini ndinoda chaizvo kuyedza ese matsva kana akasiyana distros, kuyedza misiyano mukushandisika, yemapakeji pakati peakakodzera, rpm, yum, ikozvino ndine debian 9, uye fedora, asi ini ndakaedza zvese ...
Kana mumwe munhu aine kwaanotora download iso kubva, zvinobatsira kwazvo
Jose Miguel Moreno Soto chinobata mufananidzo akadaro
batanidza pasi uye ini handisi kuwana yekuitsvaga chero kupi
Pindura kuna Jose Miguel Moreno Soto
Jose Noriega akadaro
Zvakaipa kuti LinuxAdictos yakasimudzira hutachiona hwe distro, iyo ikozvino ine domain yayo yakamiswa. Kuti iwe unowira pasi peLinuxAdictos.
Pindura José Noriega
Mune mawonero angu, ndinofunga unogona kushanda pane chero OS zvinoenderana nezvinodiwa nemunhu wega wega kana sezvaunoda.
Kune imwe iyo, kana iri distro uye isiri hutachiona, inonzi semicode os uye yakanaka kwazvo
Ini handizive, zvinoita kwandiri kunge zvinosiririsa zvekusimudzira chinyorwa, handione chakaipa kuti kune ma distros "akatariswa" pane budiriro, asi ndeyekuti chero yakadzikama pakati nepakati distro ine yakanaka repos uye nharaunda yakazvipira ine mapakeji ataurwa pano inowanika. yakasarudzika, izvo zvinotaurwa pamusoro pemitauro yakasarudzika uye yakasarudzika IDE zvakare, izvo ini handizive kusvika pamwero zvakadii zvisiri izvo kuti vanhu vatore pasi uye vaedze. Ini pachezvangu ndinokudziridza uye ndinoshandisa zvese Arch Linux uye Manjaro Linux, ndinofara chose nezvose, handisi kuzoshandisa imwe distro, kushoma iyo Ubuntu yakavakirwa, nekuti ini ndinonzwa kusununguka nazvo. Asi ini ndoda kuziva kana paine munhu anogona kutakura iyo yepamutemo webhusaiti yeiyo distro / chirongwa, nekuti haina kunditakudza, ini ndinowana dandemutande remadomaini, sekunge kutaura kuti domaini iyoyo haipo, uye kuti ivo vanoti kana ivo ndakakwanisa kuyedza, iyo IDE uye ndeupi mutauro uye IDE yakasarudzika kune ino distro, kunze kwekuda kuziva.
beto vl akadaro
Chinyorwa chakaderedzwa. Iyo peji yakawedzera. Anenge achinyumwira.
Pindura Beto VL
Chero bedzi ivo vasingandiudze chero chinhu kunyanya, handikwanise kufunga kuti ichi chimwe chinhu kunze kwekukochekera kwakanaka kwekushambadzira kugovera, zvinongondiudza kuti zvine maturusi ese asi…, hazvitaure chero chinhu nezve maitirwo acho. Ikoko kunotaura kuti haufanire kunge uri programmer asi ivo havana kundiudza chero chinhu nezvazvo, uye sezvingabvira ndichairodha pasi, kuiisa, kuyedza ... uye ndozviwana ndarasika nemitauro yakawanda yekuronga. uye maumbirwo asingakwanise kugadzira chirongwa chinosiririsa icho chinoti «hello world"
Pindura kuna Walilynux
Ndiri kuzogadzira chinobva chinonzi "Pendej OS" xD. iyo ine apt, pacman, yum, zypper, dpkg, rpm, slackpkg, nezvimwe. . .
Iyo inouya neMac OS X-senge madingindira (anonzi MaCacOS X) uye mamwe maWindows-akafanana madingindira anonzi "Wirus 3.11", "Wirus 95", "Wirus XP", "Wirus Longhorn", "Wirus Vista", "Wirus 7" , "Wirusi 8 ~ 10". ine systemd, yatove nehutachiona, zvikanganiso zvekuchengetedza, malware, nevamwe.
saka ivo vanogona kuona kuti munhu wese anoiisa sei vasinganzwisise iyo inoshanda system zvachose xD
Yakazara Hondo: Zvigaro zvoumambo zveBritannia zvatove neturera nyowani
LineageOS ikozvino inogona kuiswa pane Raspberry Pi 3